Home / Stop Thinking Start Doing
▪️ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးလိုလို ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးထဲမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ုလုပ်ချင်တာတွေ အများအပြားရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ ဘ၀ အတွက် ကြီးကြီးမားမား အိပ်မက်တွေကစလို့ ဘာသာစကားအသစ်သင်ချင်တယ်၊ အားကစားလုပ်ချင်တယ်၊ ဝိတ်ထိန်းချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံစုချင်တယ် စသည်ဖြင့် အသေးအမွှား စိတ်ကူးလေးတွေ အထိပေါ့။
▪️ ဆိုတော့ မေးစရာက ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာတွေကို ဒီတိုင်း စိတ်ကူး အိပ်မက် သပ်သပ်ပဲ ပုံဖော်ထားကြတော့မှာလား?လက်တွေ့ အသက်သွင်း ပုံမဖော်ကြတော့ဘူးလား ?
▪️ အကယ်၍များ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ ရေးခြယ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ၃ မိနစ်လောက် အချိန်ပေး ဖတ်ရှုပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
▪️ ဒီတော့ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မှာစိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ရှိနေရုံနဲ့ လက်တွေ့ ဖြစ်မလာတာလဲ အရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ အရိုးရှင်းဆုံးအဖြေထုတ်ရရင် ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်လို့ပါ။ ဆိုလိုတာက ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်းတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်နေရုံနဲ့ အိပ်မက်တွေက ပြီးပြည့်စုံမသွားနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ ရပ်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေ ရှိနေတဲ့ နေရာကြားက ကွာဟချက်တစ်ခုက “လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု” ပါ။
▪️ ဒီတော့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်မြောက်လာဖို့ဆို လေ့လာသင်ယူခြင်း ဆိုတာထက် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်အသုံးချခြင်း ဆိုတာက ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
▪️ လက်တွေ့ လေ့ကျင့် အသုံးချမှု (Practicing) ရှိလာတဲ့အခါ ချက်ချင်းလက်တွေ့ ကြိုးစားလိုစိတ် ရလာစေနိုင်တယ်။
လေ့လာသင်ယူတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမယ်ဆိုတာကို ထပ်ပြီး လေ့လာ သင်ယူနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကျင့်က ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဥပမာ - စပိန်ဘာသာစကားလေ့လာလိုတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စပိန်ဘာသာကို ဘယ်က ဘယ်လို လေ့လာရမယ်ဆိုတာမျိုးထက် အခြေခံ စပိန်ဘာသာရပ်ကို လက်တွေ့ လေ့ကျင့် ကြိုးစားလေ့လာလိုက်တာက ပိုပြီး အကျိုုးမရှိပေဘူးလား။ ဆိုကြပါစို့။ သင်က စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဂန္တဝင်စာအုပ်ကြီးတွေဖတ်မယ်လေ့လာဖတ်ရှုနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့် ရေးကြည့်မှသာ စာအုပ်ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီသဘောတရားပါပဲ။
▪️သင်ယူလေ့လာမှု တိုင်းက လက်တွေ မဖြစ်ပေမယ့် လက်တွေ့အသုံးချ လေ့ကျင့်မှု တိုင်းကတော့ သင်ယူခြင်းပါပဲ။
“Knowledge is of no value unless you put it into practice.” လို့ Anton Chekhov ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ။ သင်ယူလေ့လာမှတ်သာထားသမျှ စာတွေ့ဗဟုသုတတွေကို လက်တွေ့ အသုံးမချတဲ့အခါ ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိတော့ပါဘူး။ Online Course တွေကနေ တဆင့် Marketing ဆိုတာ ဘယ်လို ဆိုတာမျိုးလေ့လာနိုင်ကောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ ဈေးကွက်သဘောတရားထဲခြေဆန့် မဝင်ခင်အထိတော့ သင့်အတွက် Marketing ဆိုတာ ကျက်မှတ်ထားတဲ့ သီအိုရီသဘောတရားတစ်ခုပဲဖြစ်နေမှာပါ။ လက်တွေ့ဈေးကွက်နယ်ပယ် ဖြန့်ကျက်လုပ်ကိုင်မှသာ စာအုပ်တွေထဲမှာ မသိရှိခဲ့ရတဲ့ ယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလောကရဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေသဘောတရားတွေကို သဘောပေါက်နားလည်လာနိုင်မယ်။ အသစ်သစ်တွေ ထပ်မံသင်ယူနိုင်လာမယ်။
▪️ လက်တွေ့တိုင်းက သင့်အတွက် Energy အသစ်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့။ဖြစ်ချင်တာတွေကို အိပ်မက်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ေ ဖာ်နေမိတဲ့အခါ ကိုယ် ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားနိုင်တယ်။ တိုးတက်မှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်လာတယ်။ ယုံကြည်ချက်ရှိလာတယ်။ တကယ်လည်း ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို တစတစ သွားလာနိုင်တယ်။ Process ကနေ Progress တစ်ခုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ရေးခြယ်လာနိုင်တယ်။
▪️ “ If you don’t act, you don’t get. It’s that simple .” ဆိုသလိုပါပဲ။
အရပ်ပြောစကားနဲ့ပြောရရင် ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို စာရွက်ပေါ်ချရေးလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အတွက် Goal လို့ ခေါ်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ အဆင့်ဆင့်တွေက ဘဝရဲ့ Plan တစိတ်တပိုင်းဖြစ်လာတယ်။
ဒီ Plan တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ Action ဆိုတာ ရှိမှသာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝကြီးဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ပြည့်မြောက်လို့ Worth Living ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်ဗျ
ဒီတော့ ခုပဲ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပြီး တွေးတော ငေးမောနေတာရပ်လို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို သိချင်တာတွေကို သင်ယူလေ့လာရင်း လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။